Hir badeed ay sameeyaan dhulgo’yo ka dhaca badda hoosteeda. Sunaami Waa ppt download
Published byRefky Nisa Modified over 3 years ago
Presentation on theme: "Hir badeed ay sameeyaan dhulgo’yo ka dhaca badda hoosteeda. Sunaami Waa..."— Presentation transcript:
1 Hir badeed ay sameeyaan dhulgo’yo ka dhaca badda hoosteeda. Sunaami Waa...
2 Khataraha ay Sunaamiyadu Keenaan Sunaamiyadu waxay sababi karaan:  Daadad.  Sumoobidda biyaha la cabbo.  Dabab ka yimaada haan dillaacday ama tuubbooyinka gaaska.  Lumidda kaabe muhiim ah oo bulshadu leedahay.
3 U Diyaarsanaanta Sunaami  Ogsoonow halista.  Qorshee oo ku tababbaro wadiiqooyinka fakashada.  Qoyskaaga kala hadal sunaami.  La hadal wakiilka caymiskaaga.  Isticmaal oo dhegayso Raadiyaha Cimilada ee NOAA.
4 Haddii uu Dhaco Dhulgariir Xeebeed Xooggan...  Dhac, is-ded, oo xagso.  Guur markay istaagto ruxashadu.  Iska jir baallooyinka korantada oo dhacay, guryaha, iyo buundooyinka.
5 Haddii La Bixiyo Digniin Sunaami  Haddaad joogto meel halis u ah sunaami, markiiba guur.  Raac tilmaamaha ay baxshaan madaxda maxalliga ah.  Meel sare oo gudaha dhulka (xeebta ka durugsan) ah aad intaad awooddo.  Dhegayso Idaacadda Cimilada ee NOAA ama saldhigga hirarka ee Ciidamada Ilaalada Xeebta.  Guriga ku soo noqo markii ay saraakiisha maxalligu uhu ku dhahaan waa nabad uun ka dambe.
Download ppt "Hir badeed ay sameeyaan dhulgo’yo ka dhaca badda hoosteeda. Sunaami Waa..."
Ppt on nature and human mix Ppt on hard gelatin capsule manufacturers Ppt on non biodegradable waste wikipedia Ppt on marine diesel engines Ppt on network theory of immigration Ppt on types of houses Doc convert to ppt online form Ppt on limits and continuity of functions Keynote opening ppt on iphone Ppt on personal swot analysis
Visual 5.1 Hawlgallada Goobid iyo Samatabbixin  Qaymayn  Goobiddu waxay tahay:  Helidda dhibbanayaasha.  Diiwaan-gelinta meelaha.  Samatabbixintu.